यी अभिनेत्रीहरुले फिल्म क्षेत्रमा टिक्न आफ्नो अङ्ग प्रदर्शनको साहारा लिए(फोटो फिचर) - Sindhuli Saugat
यी अभिनेत्रीहरुले फिल्म क्षेत्रमा टिक्न आफ्नो अङ्ग प्रदर्शनको साहारा लिए(फोटो फिचर)
उर्वशी रौतेला :- सुन्दरताको विषयमा कोही भन्दा कम छैनन् उर्वशी रौतेला । सनी देओलसँग फिल्म ‘सिंह साहब दी ग्रेट’ बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी रौतेलाका पछिल्ला फिल्महरु परिवारसँग बसेर हेर्न सकिदैन । फिल्म ‘हेट स्टोरी– ४’ मा उनले दिएको दृश्यमा ‘बोल्डनेस’ को सीमा नाघेको छ ।
अमीषा पटेल:- करियरको सुरुवातमा उनका फिल्महरु सफल भए । उनी पनि सफल अभिनेत्रीको रुपमा परिचित भइन् । तर विस्तारै फिल्म चल्न छोडेपछि उनले अंग प्रदर्शनको साहारा लिइन् तर उनलाई त्यो उपायले पनि साथ दिन सकेन
सनी लियोन :- बलिउडमा प्रवेश गर्नुअघि ‘पोर्न स्टार’ रहेकी उनको परिचय नै खराब थियो । उनलाई आइटम गीतमा धेरै काम गराइयो र मुख्य भूमिकामा कम । उनलाई बलिउडमा फिल्म चलाउनकै लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ! : -नेपाली जस्तैे देखिने मेपन्चि, सधैँ झुक्किन्छन् नेपाली (३० तस्बिरसहित)
समाजिक संजालमा झुक्काउने र छलकपट गर्ने घट्ना दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । विशेषगरि समाजिक संजालमा एउटाको शरिरमा अर्कोको टाउको हाल्ने प्रवृद्धि त पहिलेदेखिनै हो । तर, अरु नै देशको कलाकार र मोडेललाई नेपाली कलाकार भन्दै नक्कली फेसबुक एकाउन्ट बनाउनेको पनि कुनै कमि छैन । नक्कली फेसबुक बनाएर नेपाली कलाकार भन्दै पोष्ट गर्नेको जमात बढ्दै गएको छ । अझ त्यस्ता फोटोहरुमा नेपाली कलाकारनै हो भन्दै सल्लाह र सुझावको वर्षा हुने गर्दछ । हालै समाजिक संजालमा म्यानमारकि एक मोडेल तथा नायिका मेपन्चिको फोटो भाइरल भएको छ । उनलाई नेपाली कलाकार भन्दै केहि फेसबुक प्रयोगकर्ताले लाईक बढाउन उनको तस्बिरहरु दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । उनको नाममा थुप्रै नेपाली आईडिहरु खोलिएका छन् ।
मेपन्चिको वास्तविक नाम भने मे पन्चि सो नायुङ हो । उनको बुवा उ सो नायुङले मेपन्चिको नाम परिवर्तन गर्दै मेपन्चिमात्र राखे जस्तो वास्तविक अर्थ मिस पेन्टर हो । युवा अवस्थामा सबैले आफ्नो जिवनको भविष्य र एउटा बोकेका हुन्छन् । कसैले सपना पुरा गर्छन् त कोहि सपना पुरा गर्न चुक्छन् । मेपन्चिको सपना भने कलाकार र पेन्टर बन्नु थियो । त्यसैले उनका बुवाले उनको नाम परिवर्तन गरेका थिए । मेपन्चि पेन्टर पनि हुन् । उनले कमेडि फिल्ममा अभिनय समेत गरेकि छिन् । उनी एक असफल गायिका पनि हुन् ।
मेपन्चिका बाँकी तस्बिरहरु तल छन्
लागुऔषधको भन्दा सामाजिक सञ्जालको लत कडा (लेखकः जगन कार्की)
बेलायतको नटिंघम ट्रेन्ट बिश्वबिध्यालयका प्रविधि र सामाजिक व्यवहारमा आएको बदलाव अध्ययन गर्दै आएका २ जना मनोविश्लेषकहरुले व्यक्ति सामाजिक सञ्जालको लतमा फसेको छ कि छैन भन्ने जान्न निम्न ६ प्रश्नहरुको विकास गरेका छन्ः
सामाजिक सञ्जालले हाम्रा दैनिक व्यवहार र आचरणहरुमा परिवर्तन ल्याईरहेको कुरा बिभिन्न घटनाहरूले पुष्टि गर्दै आएको छ । बेलायतमा भर्खरै प्रकाशित एक तथ्य भन्छ त्यहाँका प्रत्यक नागरिकले औसतमा प्रत्यक १२ मिनेटमा आफ्नो स्मार्ट फोन चेक गर्ने र सञ्जालहरु रिफ्रेस गर्ने एक तथ्यले देखाएको छ । यो त सामाजिक सञ्जाल नचलाउने वा अनुशासनमा चलाउनेहरु सबैको औसत समय देखिन्छ तर अधिक लतमा लागेकाहरुले प्रत्येक मिनेट चेक गर्ने देखि २–३ मिनेटमा चेक गरिरहने तथ्य पनि यसै साथ आएको थियो ।
यसरी समग्रमा खुशी हुने भन्दा बेखुसी हुने, अराजकता र अनावश्यक बिषय–बस्तुमा नचाहिने बहस, राजनीतिका उल्टा पाल्टा घोचपेचले समाजमा सहजता भन्दा असहजता र जटिलतामा बढी गईरहेको बिबिध दृष्य दैनिक रुपमा देखिन पाइन्छ । यो तथ्यलाई सञ्जालमा सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक पोस्ट र कमेन्टहरुमा लाइक र शेयर हुने दृष्टान्तले पनि थप पुष्टि गर्दछ ।
प्रकृतिसंग खेल्दै–झेल्दै अघि बढ्नु पर्ने मानव जीवन, प्रवधि र सामाजिक सञ्जालको कृत्रिम दुनियाँको सिकार बनेर मासिने त हैन ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ ्र यसर्थ यसको नकारात्मक प्रभावलाई बुझेर उचित कÞदम चाल्ने बेला भएको देखिन्छ ।
विभिन्न अनलाइनहरुमा उपलब्ध सामाजिक संजालको लतबाट बच्ने उपायहरुमा केहलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
१) सामाजिक सञ्जाल चलाउने समय तालिका बनाउने
२) जतिबेला पायो त्यतिबेला नाझुन्डिने
३) भरसक आफ्नो पेसा, ब्यबसाय तथा आवश्यक कामको लागि मात्र प्रयोग गर्ने
४) साथीभाईहरुसंग दैनिक प्रत्यक्ष च्याट गर्ने होभने मेसेज पठाएर एक अर्काको समय निर्धारण गरेर कुराकानी गर्ने
५) इन्टरनेट प्रयोगको अनुशासन बनाउने
६) दैनिक गरिने अन्य गतिबिधिहरुमा ध्यान दिने
७) पुस्तक पढ्ने प्रकृतिसंग घुलमेल हुने अन्य बानीहरुको विकास गर्ने
८) ज्यादा सामाजिक सञ्जाल चलाउने मित्रहरुलाई सम्झाउने तिनको लतबाट पनि टाढा रहने इत्यादी
सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षित रहने केहि उपायहरुः
अन्त्यमा, जतिसुकै नियम कानुन र बिधिका कुरा गरेपनि सामाजिक सञ्जालको उचित प्रयोग गर्न र दुरुपयोगबाट रोक्न जनचेतनामा वृद्धि गरिनु पर्ने र सबैले सचेत भएर बिकृति विसंगतिहरुलाई रोक्दै समय, उर्जा र सृजनशीलतालाई नष्ट नगरी प्रयोग गर्ने बानी बसाल्न सक्दा नै चौतर्फी भलो हुने र सामाजिक सञ्जालको बढी भन्दा बढी उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ । कान्तिपुरबाट साभार
पछिल्लाे – २०७६ साल वैशाख १५ गते आईतबारको राशिफल ( ज्योतिषी दुर्गा भण्डारी)
अघिल्लाे – वैशाख १५ गते आईतबार देखी वैशाख २१ गते शनिबार सम्मको साप्ताहिक रासिफल (ज्योतिषी दुर्गा भण्डारी)
पछिल्लाे - शैक्षिक सुधारमा जुट्दै सिन्धुलीका स्थानीय तहहरु
अघिल्लाे - जेठ ३ त आयो नि कमरेडहरु !